प्रतिनिधिसभा समितिमा १२ सांसदको जिम्मेवारी हेरफेर
काठमाडौं, माघ १७–प्रतिनिधिसभाका १२ सांसदको समितिको जिम्मेवारी परिवर्तन र हेरफेर भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निवर्तमान उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेसहित १२ सांसदलाई जिम्मेवारी तोक्ने र हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले पारित गरेको हो ।
निवर्तमान उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेलाई उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य रामेश्वर राय यादवको ठाउँमा प्रभु साहलाई राखिएको छ । परामर्श समितिका सदस्य राय मन्त्री भएपछि नेकपाकै सांसद साहलाई राखिएको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषदका निवर्तमान सदस्य गोकर्ण विष्टलाई अर्थ समितिमा, मातृका यादव र रामकुमारी चौधरीलाई कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा, थममाया थापालाई महिला तथा सामाजिक समितिमा, लालबाबु पण्डितलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
उपनिर्वाचनबाट सांसद भएकी विद्या भट्टराईलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा, निवर्तमान मन्त्री चक्रपाणि खनाल र रघुवीर महासेठ तथा निवर्तमान राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालाई सार्वजनिक लेखा समितिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । पदम गिरीलाई कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । सांसद मायादेवी न्यौपानेलाई कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट उद्योग वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ ।
संसदको शून्य समयः शौचालयदेखि सडक निर्माणसम्मको बहस